XOG DEG DEG AH: Yaa ugu cad-cad Doorashada G/kuxigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo berri dhacaysa? | PuntlandTimes-	Wednesday, February 22nd, 2017	Home
XOG DEG DEG AH: Yaa ugu cad-cad Doorashada G/kuxigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo berri dhacaysa?
MUQDISHO(P-TIMES)- Baarlamaanka Soomaaliya ayaa berri 12 January 2017 dooranaya gudoomiye kuxigeenada baarlamaanka Faderaalka, oo ay u sharaxan yihiin 18 Musharax oo iskugu jira kuxigeenka koowaad iyo Kuxigeenka labaad.
Ragga sida aadka ah isha loogu hayo waxaa kamid ah Jagadda Gudoomiye kuxigeenka 1aad ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana ku loolamaya rag door ah oo saameyn ku leh siyaasadda Soomaaliya.
Rugcadaaga Siyaasadeed ee sida aadka ah Bulshada Soomaalidu u hadal-heysay sannadkii lasoo dhaafay Faarax Sh Cabdulqaadir Maxamed ayaa jagaddan u tartamaya, waxaana saacadihii ugu dambeeyey la dareemayay galaangalkiisa siyaasadeed.
Faarax oo ah nin inta badan saaxiib la ah Siyaasiinta iyo xildhibaanada baarlamaanka Faderaalka ayaa si cad ugu sheegay xubnaha baarlamaanka Faderaalkan in uu wax badan ka bedeli doono arrimaha baarlamaanka, isagoo caawinaya gudoomiyaha baarlamaanka Prof Maxamed Sh Cismaan Jawaari.
Warar ay helayso Puntlandtimes.com waxay cadeynayaan in si aad ah loo saadaalinayo in uu codad fara badan kusoo bixi doono Faarax Sh Cabdulqaadir oo ah siyaasi saameyntiisa laga dareemayo mandiqada oo dhan.
Haddii uu guuleysto Faarax Sheekh Cabdulqaadir waxay la macno tahay in baarlamaanka Soomaaliya guddoonkiisa uu ku biiray shaqsi wax badan ka soo qabtay gudaha Soomaaliya, xili ay dad badan kasii cararayeen gudaha dalka, balse isaggu go’aansaday in uu ubadka wax barro, kana qeyb qaato adeegyada Waxbarashada.
Dadka dhaliila Faarax waxay ku eedayaan oo kaliya in uu taladda iyo go’aanka lahaa dawladda afartii sanno ee lasoo dhaafay, waxayna u muuqdaan kuwa danahooda gaarka ah ilaashanaya ama ka dhex arki waayay dawladda Faderaalka.
Dadka taageersan waxay ku sifeeyeen in uu yahay ruux wax badan qaban karra, sidaas oo kale saameyntiisa siyaasadeed ay tahay mid muuqata oo aan marnaba ka laaban go’aamaddiisa siyaasadeed, si wanaagsan u oofiya balanka.
Isha ayaa si weyn loogu hayaa guusha Faarax Sheekh Cabdulqaadir Maxamed oo lagu tiriyo saaxiibka koowaad ee Madaxweynaha dawladda Faderaalka ee hadda waqtigu ka dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana la saadaalinayaa guusha Faarax in ay horseed u noqon karto guul siyaasadeed oo uu gaaro Xasan Sheekh Maxamuud.
Geele says:	January 11, 2017 at 11:24 pm	Are you sure?
Hadduu sida la sheegay dalka si dad an u xukumayay muxuu dalka 20 sano gadaal ugu celiyay?
Ogow danaheyga Kama waayin dalka waayo 28 years ago ayaan ka tegay.
Damujiid or USC youth wing prove us wrong. Had all macan, been iyo sano gaar ah ayaa koleyba anigu aakhiro marqaati ka ahay